Home » Vaovao momba ny fizahan-tany an'ny governemanta sy ny sekolim-panjakana » Kenya dia manery ny fiaraha-miombon'antoka amin'ny fanjakana sy ny tsy miankina amin'ny famahana ny adin'ny olombelona sy ny bibidia
Minisitry ny fizahan-tany sy ny fiainana an-tany Kenyan Andriamatoa Najib Balala
Kenya dia mamoy ny bibidia bebe kokoa noho ny adin'olombelona sy ny bibidia noho ny mangalatra. Mila ny hatsaram-panahin'ny olona isika, hoy ny sekreteran'ny fizahan-tany sy ny fiainana an-tany any Kenya, Najib Balala, androany.
Ny sekretera kabinetra any Kenya momba ny fizahan-tany sy ny fiainana dia, Najib Balala, dia niantso ireo mpiaramiasa amin'ny sehatry ny biby sy ny fiarovana azy ireo hiara-hiasa amin'ny governemanta hanatsara ny fiaraha-miombon'antoka amin'ny fanjakana sy ny tsy miankina amin'ny famahana ny adin'ny biby sy ny biby.
“Vetivety ny fepetra fanalefahana. Ny dinika dia mila milentika lalindalina kokoa amin'ny lafiny famatsiambola, sarintany ary fandraisana fanapahan-kevitra hentitra nefa lehibe ho fiarovana ny bibidia. Avelao ny vondrona manerantany hanohana feno ny ezaka fiarovana ny elefanta amin'ny teny sy amin'ny karazany, "hoy i Balala nanamarika.
Ny CS dia nanao ny fanamarihana omaly nandritra ny webinar iray izay nijery ny fandefasana sy ny fifanakalozan-kevitra momba ny 'Living on the Edge', horonantsary fanadihadiana nataon'i Black Bean Productions izay nanasongadina ny fahorian'ny krizy afrikanina- Elefanta.
Ny webinar, notarihan'ny talen'ny Fifandraisan'ny Governemanta Elephant Protection Initiative (EPIF), Dr. Winnie Kiiru, dia nanasongadina fifanakalozan-kevitra nataon'ny mpanao politika malaza, mpiaro ny tontolo iainana sy ny fiarovana ny tontolo iainana, manam-pahaizana, mpampiasa vola ary mpanara-dalàna izay nahitana:
Prof. Lee White, CBE: Minisitry ny ala, ranomasina, tontolo iainana ary ny fiovan'ny toetrandro, Gabon
Greta Lori: talen'ny fampandrosoana ny programa, EPIF
Grant Burden: Mpanolo-tsaina manokana momba ny fifandonana elefanta olombelona, ​​EPIF
Niresaka nandritra ny webinar, Prof. White nilaza fa misy fiatraikany amin'ny mponina elefanta ny fiovan'ny toetrandro ka mahatonga azy ireo hiala ny fonenany hitady sakafo any amin'ny toeram-ponenan'olombelona.
Grant Burden kosa dia nanantitrantitra ny filàn'ny fiarahamonina eo an-toerana rehefa miresaka momba ny vahaolana maharitra amin'ny adin'olombelona sy ny bibidia.
Niorina tamin'ny hevitr'Andriamatoa White, Greta Lori dia nanamafy ny amin'ny fiantraikan'ny fiovan'ny olombelona, ​​ny fambolena, ny indostria ary ny toetr'andro amin'ny bibidia, ary ny filàna famaritana fomba vaovao ahafahantsika miara-miaina amin'izy ireo am-pilaminana.
CS Balala dia nanamafy ny amin'ny fanidiana ny tsena Ivory ao amin'ny Vondrona Eropeana sy Japon satria ny filazany fa ny fisian'ireny tsena ireny no loza mitatao lehibe indrindra amin'ny fiarovana ireo elefanta.
“Tamin'ny taona 2020, rhino 0 sy elefanta 9 no nogiazana tany Kenya. Dingana iray lehibe amin'ny fiarovana ny bibidia antsika. Na izany aza, very biby marobe isika noho ny adin'olombelona sy ny bibidia fa tsy ny mangalatra. Tokony hamaha izao olana izao isika, raha tsy izany dia ho very ny fitiavan-tsain'ny olona izay hanimba ny fiarovana ny Elefanta, "hoy i Balala.
Nilaza ny CS, fa rehefa very ny finiavan'ny olona isika, dia ho very ny fandaharam-pianarana fiarovana manontolo. Izany no antony ilantsika mandray andraikitra dieny izao, hiarovana ny vahoaka ary hampiasa vola amin'ny fepetra fanalefahana ny ady amin'ny biby sy olombelona izay maharitra ary mahatonga ny olona hahatsiaro ho voaro amin'ny bibidia.